Mpandresy TheAwards 2018 ho an'ny fampiharana sy lalao tsara indrindra any Espana | Androidsis
Ny fampiharana sy lalao tsara indrindra any Espana ao amin'ny TheAwards
Efa niresaka taminay momba ny Lisitry ny loka TheAwards, inona no azonao vakina eto. Ity lanonana loka ity dia nitady ny hanomezana valisoa ireo fampiharana sy lalao espaniola tsara indrindra tamin'ny taona, tao anatin'ny sokajy maromaro. Azo lazaina fa ny fanontana tamin'ity taona ity, ny voalohany notanana, dia fahombiazana, raha raisintsika ny volavolan-kevitra marobe narotsaka. Farany, tamin'ny 15 Novambra no nankalazana ny fandefasana izany.
Jury matihanina no niandraikitra ny fisafidianana ny tolo-kevitra tsara indrindra ao anatin'ny sokajy tsirairay. Vokatr'izany, ny fanontana TheAwards tamin'ity taona ity dia niovaova be tamin'ny lafiny mpandresy. Zavatra manasongadina ny kalitaon'ny fampiharana sy ny lalao noforonin'ny Espaniola.
TheAwards dia nanome satroboninahitra fampiharana tsara indrindra ho an'ny rehetra, ny fampiharana tsara indrindra any Espana amin'ny taona 2018. Ho fanampin'ity fampiharana ity dia mahita mpandresy amin'ny sokajy isan-karazany izahay avy eo, folo izy ireo. Noho io antony io dia holazainay aminao voalohany ny momba ilay mpandresy lehibe, ary avy eo ny momba ny sokajy sisa amin'ireo loka ireo.
1 Agora Images: ny fampiharana tsara indrindra an'i Espana 2018
2 Mpandresy TheAwards 2018
Agora Images: ny fampiharana tsara indrindra an'i Espana 2018
Ny mpandresy tamin'ny fifaninanana dia ny Agora Images, izay mety toa mahazatra ny sasany aminareo. Vokatry ny fandresena azon'izy ireo dia nahazo ny loka TheAwards izay mitentina 65.000 Euros ireo mpandrindra izay azo antoka fa mety ho fanampiana lehibe ho an'ny orinasa.
Momba inona ity fampiharana ity? Rindrambaiko mikendry ny famelana ireo mpampiasa hahazo vola amin'ny sary zarain'izy ireo. Azontsika atao ny mamaritra azy io ho toy ny tambajotra sosialy misy sary. Na dia amin'ity tranga ity aza ny zavatra ataon'izy ireo dia mifandray amin'ny mpaka sary miaraka amin'ireo olona liana amin'ny asanao. Ka afaka mahazo mpitantana vaovao hanohy ny asany matihanina izy ireo. Efa nihoatra ny fisintomana iray tapitrisa amin'ny finday ny fampiharana.
Raha liana amin'izany ianao, na mahafantatra olona mety ho, azonao sintonina maimaim-poana ny fampiharana amin'ny findainao Android etsy ambany:
Developer: Loka AGORA
Mpandresy TheAwards 2018
Ho fanampin'ny sary Agora, mahita finalistes folo izahay amin'ny ambiny amin'ireo sokajy amin'ireo loka ireo. Fampiharana sy lalao izay mahazo ny fankatoavana ny mpitsara matihanina miandraikitra ny fanomezana ireo tolo-kevitra ireo. Raha ho anao, ireo mpandresy amin'ireto sokajy ireto dia mahazo loka mitentina 16.000 euro, izay azo antoka fa mety ho fanampiana lehibe.
Ireo mpandresy amin'ny sokajy isan-karazany amin'ireto TheAwards 2018 ireto dia ireto manaraka ireto, milaza aminao bebe kokoa momba ny mpandresy tsirairay izahay:
App tsara indrindra ho an'ny toekarena, ara-bola ary ny orinasa: Banky EVO. Izy io dia ny fampiharana finday ao amin'ny banky EVO Banco.
Lalao tsara indrindra any Espana: Parcheesi Online. Ny lalao birao mahazatra dia noforonina indray ho an'ny telefaona finday, noho ny lalao an-tserasera marobe
App fanabeazana sy magazay tsara indrindra: ABA teny anglisy. Fampiharana hianarana anglisy amin'ny telefaona
Fampisehoana fialamboly sy hetsika tsara indrindra: Wegow. Misaotra an'ity fampiharana ity dia tsy ho diso anjara amin'ny kaonseritra rehetra ianao
Fampiharana fomba fiaina tsara indrindra: Mihinàna fotsiny. App hahazoana sakafo ao an-trano.
Fampiasa finday sy fivezivezena tsara indrindra: eCooltra. Fampiharana hitantanana ny serivisy fanofana moto herinaratra
App fahasalamana sy fahasalamana tsara indrindra: Dokotera ambony. Fampiharana hahazoana diagnostika haingana
Fampiharana tsara indrindra sy fampiharana haino aman-jery sosialy: Olona. Fampiharana hahitana tolo-kevitra amin'ny karazana rehetra.
Ny fandraisana anjaran'i Huawei AppGallery, Snapchat, Amazon Web Services, AppSamurai, Sketch, iSocialWeb, Tappx, Acumbamail, SysAdminOk, PickASO, TheTool, wwwhatsnew, Mobile World Capital, Edrans, SocialPubli ary ApiumHub no nahatonga ny fankalazana ity andiany voalohany an'ny TheAwards ity. Amin'izao fomba izao, 220.000 XNUMX euro no nozaraina tamin'ny loka amin'ireo rindranasa sy lalao ireo.
Raha raisina ny fahombiazana lehibe tamin'ity fanontana voalohany ity, tsy hahagaga raha fanontana vaovao no hatao amin'ny taona ho avy amin'ireo TheAwards ireo. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny hetsika na ireo mpandresy dia azonao atao ny mitsidika ny tranokala ofisialiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny fampiharana sy lalao tsara indrindra any Espana ao amin'ny TheAwards
Ahoana ny fomba fampidinana ny tononkiran'ny hiranao sy ny fonony amin'ny fomba tena tsotra
Tadiavo ny fitaovako avy amin'i Google dia hametraka ny findainao very amin'ny sari-tany anatiny